Nyanzvi Inotakurika / tirera Rudzi Diesel jenareta Set Mugadziri uye Fekitori Zvakananga | Wako Akafanana
5kw dhiziri genset
5kw Welding jenareta Set
Vhura Furemu Rudzi
Chinyararire Canopy Type
Natural Gasi jenareta
Spare Zvikamu zveJenareta Sets
Gungwa Mvura Desalination Genset
Sanganisa Kutonhora, Kuchenesa uye Simba Sisitimu
Chinotakurika / tirera Rudzi Diesel jenareta Set
Iyo jenareta seti yetrailer mhando inogona kuganhurwa muya ruoko-inokwidzwa mota-yakaiswa jenareta seti, tricycle jenareta seti, ina-vhiri jenareta seti, mota yemagetsi chiteshi, tirera magetsi chiteshi, nhare yakaderera-ruzha magetsi chiteshi, nhare yemagetsi mudziyo chiteshi, magetsi mainjiniya mota, nezvimwe.
Traction: tevera chinofamba chirauro, 180 ° turntable, anochinja mudhiraivho, chengetedza kuchengetedzeka mukutyaira.
Braking: Kune air brake interface uye nemaoko-anoshanda mabhureki system kuona kuchengetedzwa panguva yekutyaira.
1. Inoita yakaderera ruzha kuita, jenareta ruzha muganho 75dB (A) (1m kure neyuniti).
2. Iyo yakazara dhizaini yeyuniti iri compact mune chimiro, diki vhoriyamu, novel uye yakanaka muchimiro.
3. Multi-rukoko nhovo impedance mismatch ruzha kuputira kavha.
4. Inobudirira ruzha kudzikisira mhando mizhinji-chiteshi kudya uye kupera, kutora uye kupedza mweya mweya, kuona yakakwana simba kuita kwechikwata.
5. Makuru impedance chinoumba silencer.
6. Huru inokwana mafuta anopisa mafuta.
7. Yakakosha kukurumidza kuvhura ndiro yekuvhara kuti ive nyore kugadzirisa.
"Usashande" kana zviratidzo zvinonyevera zvakafanana zvinofanirwa kusungirirwa kubva pakutanga switch kana lever isati yagadziriswa kana kugadziriswa kwejenareta yakatarwa.
Usatendere vasingatenderwe vashandi padhuze neinjini apo jenareta seti iri kugadziriswa kana kugadziriswa.
Dhinda bhatani rekumira kwechimbichimbi pane rinodzora jenareta seti, uye jenareta yekuburitsa switch inofanira kunge iri muO OFF (OFF) chinzvimbo.
Zvinoenderana nezvinodiwa nemamiriro ekushanda, kana uchipinda munzvimbo yekumisikidza jenareta seti, ngowani yekuchengetedza inofanira kupfekwa, uye maziso ekudzivirira uye zvimwe zvekuchengetedza zvinofanirwa kupfekwa kana zvichidikanwa.
Pfeka kudzivirira nzeve kana uchimhanyisa injini munzvimbo yakavharidzirwa kudzivirira kukuvara pakunzwa.Usapfeke zvipfeko zvakawandisa uye zvishongo pabasa, izvo zvinogona kusunganidzwa pamufaro kana zvimwe zvikamu zveinjini.
Ita shuwa kuti zvese nhovo kana hood zviri panzvimbo yeinjini Chenjera paunenge uchishandisa ese ekuchenesa zvinhu.Usachengete ekugadzirisa mhinduro mumidziyo yegirazi, sezvo midziyo yegirazi inokanganisa kukuvara.
Kana imwe yeanotevera mamiriro ezvinhu ikaitika, nguva yekuchaja inobvumidzwa kuwedzerwa nenzira kwayo:
(1) nguva yekuchengetedza bhatiri inopfuura mwedzi mitatu, uye nguva yekuchaja inogona kunge iri maawa masere; (2) tembiricha iri mukati inopfuura 30 ° c (86 ° F) kana hunyoro hwehukama hunogara pamusoro pe80%, uye nguva yekuchaja maawa masere.
(3) Kana iyo nguva yekuchengetedza bhatiri iri inopfuura gore rimwe, iyo nguva yekuchaja inogona kunge iri maawa gumi nemaviri.
(4) Panoperera tambo yekuchaja, tarisa kana huwandu hwemvura yeelectrolyte hwakakwana, uye wedzera iyo yakajairwa electrolyte ine chaiyo yakatarwa giravhiti (1: 1.28) pazvinenge zvichidikanwa.
Paunenge uchichaja bhatiri, tanga wavhura iyo firita chivharo kana vent kapu yebhatiri, uye tarisa iyo elektrolyte level, uye gadzirisa nemvura yakadonhedzwa pazvinenge zvichidikanwa.Kuwedzera, kuitira kudzivirira kuvhara-kwenguva refu kwebhatiri sero kusvibisa gasi haigone. kuburitswa munguva uye kudzivirira kukonzeresa kwemadonhwe emvura mukati memadziro epamusoro pechitokisi, kutarisisa kunofanirwa kubhadharwa kuvhura yakakosha mweya yekufambisa kutenderera kwakakodzera kwemhepo.
Pashure: 5kw Welding Diesel jenareta yakatarwa
Zvadaro: 15kva-500kva Yakavhurika / Yakanyarara Yakasikwa Gasi jenareta Sets
Chinotakurika / tirera Rudzi Diesel jenareta
Simba Range 10KVA-500KVA
Voltage 220 / 380V, 230 / 400V, 110 / 220V, 240 / 415V, 254 / 440V, 277 / 480V
Injini naCummins, Perkins, Doosan, Wandi, Kubota, Yanmar, Isuzu, nezvimwe.
Alternator Leroy somer, Stamford, Marathon, nezvimwe.
Mutungamiriri Deepsea, Comap, Smartgen, nezvimwe.
Dunhu Rinotyora ABB / SCHNEIDER, nezvimwe.
Type Vhura / Chinyarara
Fuel Tank Pamusoro tangi, Base Tank, Kunze Kwezuva Nezuva Fuel Tank
Zvingakudetsera zvinotsigira zvigadzirwa Chinotakurika / Ngoro Yemhando Dhiziri jenareta / Kubvumirana Sisitimu otomatiki Chinja / Dummy Mutoro Zuva Tangi
Jenareta Yakawedzera Chikamu
1. Injini: Injini nyowani.
2. Alternator: Brand nyowani isina brushless alternator, kuroora kubereka, IP23, H kuputira kirasi.
3. Base Furemu: Heavy basa simbi mugero base base furemu.
4. Radiator: Nekuchengetedza muchengeti.
5. Vibration Damper Vibration damper pakati peInjini / Alternator uye base furemu
6.Breaker: 3-pole kuburitsa bhuku redunhu mudariki seyakajairwa, 4 matanda esarudzo
7. Mutungamiriri: Deepsea modhi, Comap kana Smartgen, nezvimwe.
8. Silencer: Heavy basa maindasitiri mhando silencer pamwe anochinjika kudonhedza, kugokora.
9. Bhatiri: Varta Brand, yakakwira inokwenenzverwa kuchengetedza isina bhatiri c / w bhatiri tambo.
10. Fuel Tank: Maawa masere peturu peturu kana yakagadzirirwa
11.Turu Kits & Mabhuku. Standard chishandiso kits uye yakazara oparesheni / yekugadzirisa / emanyorerwo eJenareta / Injini / Alternator / control panel, nezvimwe
5kw Welding Diesel jenareta yakatarwa
10-1000kva Vhura Furemu Rudzi Dhiziri Simba Rinoita ...
5kw yakavhurika / yakanyarara mweya wakatonhora dhiziri jenareta seti
15kva-500kva Yakavhurika / Yakanyarara Yakasikwa Gasi jenareta Sets
Kambani yedu yakapihwa iyo National High ...
"Sayenzi yakakosha simba rekufambisa mukati, izwi rekuti" nyowani uye yepamusoro tekinoroji bhizinesi "rinoreva kodzero dzekambani dzakazvimiririra kodzero dzenzvimbo dzakaumbwa kuburikidza nekuenderera mberi nekutsvaga uye kusimudzira uye shanduko yetekinoroji ...
Runhare:0086- (0) 591-83431596
Nyika 3, Industrial Park, Huanxi Town, Jin'an Dunhu, Fuzhou, Fujian, China